उमेर पुगेका बालबालिकाले पनि किन गर्छन् ओछ्यानमै पिसाब ? – Health Post Nepal
२०७६ पुष २७ गते ११:०४
बालबालिकालाई कसरी मोबाइलबाट टाढा राख्ने?
बालबालिकाले खाना खान मान्दैनन्, के गर्ने?
निश्चित समयमा तोकिएको मापदण्डभित्र शारीरक, मानसिक, भौतिक तथा सामाजिक विकास हुनु वाञ्छनीय छ । यदि कुनै बालबालिकाले ३ वर्षको उमेरपछि ओछ्यानमा पिसाब फेछ वा कट्टु भिजाइरहन्छ भने त्यसलाई असमान्य वा रोगको रुपमा लिइन्छ । बालिकाहरुभन्दा बालकहरु बढी यो समस्याबाट पीडित हुन्छन् ।
मनोवैज्ञानिक : परिवारमा बराबर झगडा भइरहने, केटाकेटीहरुलाई सामान्य सद्भावना, प्रेमको अभाव र धेरै कडा बाबुआमा भएमा पपनि यो समस्या देखापर्दछ । बाबुआमाले बच्चालाई बढी हप्काएर तर्साएर, गाली गर्दा यो समस्या झ्न बढ्दै जान्छ ।
पिसाब फेर्न नसिकाए : बाबुआमाले बच्चालाई समयमै ठीक तरिकाबाट पिसाब फेर्न नसिकाएमा पनि यो समस्या देखा पर्दछ ।
शारीरिक कारणहरु : चुर्ना परेमा, मुत्र प्रजनन प्रणालीका रोगहरु, शरीर रचनामै कमजोरी वा व्यवधानले पनि कट्टुमा पिसाब फेर्ने हुन्छ ।
रोग पत्ता लगाउन गाहो नभए पनि कारण पत्ता लगाउन गाहो पर्दछ । बाबुआमासँग र बच्चासँग विस्तृत कुराकानी गर्नुपर्दछ । बच्चाको संवेदनात्मक भावनाहरुको पनि ख्याल राख्नु आवश्यक छ । परजीवीहरु पत्ता लगाउन दिसा परीक्षण वा रक्तपरीक्षणबाट पत्ता लाग्छ । कहिलेकाहीँ बच्चाहरुमा पिसाब थैली वा मूत्रनलीको पत्थरी पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि छिनछिनमा पिसाब लाग्ने हुन्छ । यो त सामान्य एक्सरे वा अल्ट्रसाउण्डबाट पत्ता लाग्छ ।
नसाको कमजोरी, कम्मरमा चोटपटक पनि पिसाब रोक्न सक्दैन । दिसापिसाब पपरित्याग भन्ने हाम्रो नियन्त्रण भरपर्ने कुरा हो तर जब हाम्रो नियन्त्रणबाहिर हुन्छ, त्यसलाई रोग वा असामान्य अवस्था मान्न सकिन्छ ।
उपचार : यदि समयमै ध्यान पुर्याउन र उचित उपचार पुर्याउन सकिएन भने बच्चाले ठुलो उमेर सम्म पिसाब फेरिरहने समस्याबाट ग्रसित हुनुपर्दछ र व्यक्ति शारीरिक ग्लानि साथै मानसिक समस्याबाट पीडित हुन्छ । कारण पत्ता लगाई यसको उपचार गर्नुपर्दछ ।
चुर्ना परेमा : ट्याबलेट मेडेन्डाजोल १०० ग्राम दिनको २ पटक ३ दिनसम्म दिनुपर्दछ अर्थात औषधि उमेर र तौलअनुसार निर्धाररण गर्नुपर्दछ ।
पिसाबसम्बन्धी रोग भएमा : धेरैजसो (१) नेलिडोक्सिक एसिड १ चम्चा दिनको ४ पटक चौध दिनसम्म २. सिर ब्याक्ट्रि १ चम्चा २ पटक १० दिनसम्म (३) ट्याब्लेट नरफ्लकासिलिन २०० मि.ग्रा दुई पटक प्रतिदिन १४ दिनसम्म । औषधि प्रयोग गर्दा पिसाब जाँच गरेर सेन्सिटिभिटि टेस्ट गर्नुपर्दछ ।
पत्थरी भएमा : सानो सानो भए त ट्याबलेट सिस्टोन दिनको दुईपटक ३ महिनासम्म खाएमा जान्छ । पपानी प्रशस्त पिउनुपर्दछ । गहतको झोल खानुपर्दछ । ठुलो भएमा अप्ररेसन गरेर नै निकाल्नुपर्दछ ।
राति पिसाब फेर्न उठाउनुपर्छ । सुत्नेबेलामा पिसाब फेराउन बिर्सनुहुँदैन । अपरान्हपछि र बेलुकी कम पानी पिउनुपपर्दछ । आजकाल बच्चालाई पिसाब लाग्ने बेलामा बज्ने विद्युतीय घण्टी पनि पाइन्छ ।
औषधि : ट्याबलेट imipramine २५ देखि ७५ ग्रामको सुत्ने बेलामा प्रयोग गर्दा पनि राम्रो परिमाण देखिएको छ । ट्याबेलट neo दिनको दुईपटक एक महिनासम्म खुवाउन सकिन्छ । एमिट्रिप्टलिन डाइजेकामले पनि कहिलेकाहीँ का मगर्दछ । तर, औषधि जहिले पनि डाक्टरको सल्लाहबाट मात्र खुवाउन वेस हुन्छ ।
Tags: पिसाब, बालबालिका